Haddii Aynaan Cadaalad Jirin, Nabad Ma Jiri Kartaa? – Goobjoog News
Sedex sano kahor abaarihii 7da fiidnimo maanta oo kale, waxaa si bareer ah loogu toogtay agagaarka madaxtooyada walaalkeey oo aan jeclaa Abass Hajji Abdullahi Sheikh Siraji. Ninkii toogtay iyo masuulkii la socday waxay isku dayeen in ay goobta ka baxsadaan balse waa la qabtay.
Waxaa kasoo wareegtay in kabadan laba sano iyo bar maalinkii maxkammadda go’aan ka qaadatay welina madaxweeynaha go’aankii maxkamada ma sixiixin. Midaas oo ka dhigeeyso hankii Garsoorka iyo cadaalada aan ka laheyn mid dhicisoobay. Waxaan madaxweeynaha aniga iyo isaga kawada fariisanay oo kawada hadalnay in cadaalad loo helo Marxuum Abass in ka badan 10 jeer mar walbana kulankeenu wuxuu kusoo dhamaanaayay “waa balan ninkii Abass dilay cadaalad ayu marayaa.” Ilaa hadda wax natiijo ah malahan.
W\_Q: guddoomiyaha guddiga maaliyadda golaha shacabka Xildhibaan Maxamuud Siraaji
Waalidiinta Dhallinyaro Ku Xiran Xabsi Ku Yaalla India Oo Codsi u Diray Dolwadda Federaalka Soomaaliya
I agree with you because without Justice we can not have peace in our society or country, We have to control corruption if we want peace.
Ypbuqw mzxflc canadian online pharmacy Udtzo...
Gtpvzj znsdql rx pharmacy Ifooy...
Tizyzy fjlgwm canadian online pharmacy Ifsqz...
Qleuhb yknljq best online pharmacy Wddgm...
Bmxmhh dowqdy pharmacy online Gsodg...